यौन स्वास्थ्य Archives - Page2of9- HealthyKhabar
विकासोन्मुख देशका महिलामा पाठेघरको क्यान्सर धेरै
काठमाडौँ,१४असार। विकासोन्मुख देशका महिलामा पाठेघरको क्यान्सर धेरै देखिने गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ, नेपाल प्रहरी अस्पतालको आयोजना तथा टोखा नगरपालिकाको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित ‘महिलामा हुन सक्ने क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच’का वक्ताले अल्पविकसित मुलुकका महिलामा पाठेघरको क्यान्सर धेरै हुने गरेको जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका अध्यक्ष प्रमिला खनालले नेपालमा वर्षेनी क्यान्सरका कारण हजारौँ महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताउँदै उक्त रोगबाट बच्न श्रीमती सङ्घले जनचेतनामूलक तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । “पाठेघरको क्यान्सरबारे आम महिलामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ,«”–उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष खनालले अपराध रोकथाम र सामाजिक सुरक्षा अभिवृद्धिमा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा समुदायलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले महिलामा हुने विभिन्न प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि नगरपालिकाले सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । “जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले चाँडै नै नगरस्तरीय अस्पताल सञ्चालन…
२० वर्षीया असली बाई अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा केन्या पुगिन् । उनी राम्रो आय हुने रोजगारीको वाचा गराइएर केन्या पु¥याइएकी थिइन् । असली सात जनाको परिवारको जेठी छोरी हुन् । धेरै सन्तान भएका कारण असलीको बाबुआमालाई घरको गर्जो टार्न पनि कठिन भइरहेको थियो । त्यसै कारण घरकी पहिलो सन्तान असलीले सात वर्षको उमेरमा विद्यालय छाडन् बाध्य भइन् । त्यसपिछ उनी परिवारलाई भरथेग गर्न आफै काम गर्न थालिन् । यौन दासत्वको नारकीयता एकपछि अर्को काम गर्दै उनी काठमाडौँमा नाच्ने पेसामा आइपुगिन् । सोही कामको सिलसिलामा उनको भेट विशाल भन्ने एक जना युवकसँग भयो । उनले विशाललाई आफ्नो समस्या बताइन् । विशालले उनलाई केन्यामा राम्रो आय हुने कामको प्रस्ताव राख्यो ? विशाल केन्यामा युवती पठाउने काम गर्दा रहेछन् । ‘विशालले मसँग केन्याका एक जना व्यक्तिले कलाकार खोजिरहेको बतायो । उसको कुरा सुनेपछि म केन्या जान तयार भएँ,’ उनले भनिन्, ‘उसैले मलाई आसिफसँग भेटाइदियो ।’ सम्पर्क भएको एक हप्ताभित्र बाईले पासपोर्ट र हवाई टिकट…
काठमाडौँ, ९ असार ।कानूनीरुपमा गर्भपतन निःशुल्करुपमा गरिने व्यवस्था भए पनि ग्रामीण भेगका धेरै महिलालाई त्यसबारे जानकारी भएको देखिदैन । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्थामा आइसकेको छ । तर कानूनको जानकारी नहुँदा महिला असुरक्षितरुपमा गर्भपतन गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला, विकास तथा महिला मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५’ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफलमा सूचीकृत प्राप्त अस्पतालमा गएर गर्भपतन गराउनुपर्छ भन्नेबारेमा जानकारी नभएको कुरा उठेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले सूचीकृत अस्पतालबाट गर्भपतन गर्ने, गर्भपतनपछि र सुत्केरी पछाडि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे ज्ञान नहुँदा गर्भपतन र सुत्केरीको अवस्था जोखिममा रहेको बताए । उनले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि सरकारले आवश्यक बजेट नछुट्याएको र त्यसमा पनि सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हुँदा काम गर्न कठिन भएको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव पुष्पा चौधरीले नेपालको दुई दशकभन्दा लामो मेहनत र सङ्घर्ष गरेर सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी…
एजेन्सी । समलैंगिक विवाहमा बाँधिएको छोराको लागि ६१ बर्षीया आमाले आफ्नो कोख प्रयोग गरि नातिनी जन्माईदिएकी छन् । चार बर्ष अघि समलैगिक विवाह गरेको आफ्नो ३२ बर्षीय छोरा म्याथ्यू र उनका समलैंगिक श्रीमान् २९ बर्षीय इलियट डोगर्थीका लागि ६१ बर्षीय आमा सिसिल इलिइडिज सरोगेट मदर बनेकी हुन् । उनले गत २५ मार्चका दिन अमेरिकाको ओमाहामा रहेको युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का मेडिकल सेन्टर ५ पाउण्ड १३ औँन्स तौलको शिशुको जन्म दिएकी हुन् । यसअघि सिसिल सरोगेट मदर बन्न तयार भएपछि चिकित्सकहरुले उनकै छोरा म्याथ्यूको शुक्रकिट र म्याथ्यूका श्रीमान् डोगर्थीका २६ बर्षीया बहिनी लि यिरवीको डिम्ब मिलाएर भ्रुण तयार पारेका थिए । जव उनीहरुले सिसिलको पाठेघरमा भ्रुण राखे त्यसले हुर्कँदै गएको आकार दिन थाल्यो । चिकित्सकहरु भन्छन्,’आइभिएफ प्रविधिबाट गरिएको पहिलो प्रयासमै गर्भाधान सफल भयो ।’ त्यसो त सिसिलले पछिल्लो सन्तान जन्माएको तीन दशक भैसकेको थियो । महिनावारी रोकिएको पनि १० बर्ष नाघिसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरोगेसीबाट सन्तान जन्माउने निर्णय लिन सिसिल मात्रै…
सेक्स जीवनप्रति दम्पत्तिको रुची कम: अध्ययन
सेक्स जीवनको लागि अति आवश्यक कुरा हो । नियमित सेक्सले अनेक फाइदा हुने विभिन्न अध्ययन अनुशन्धानबाट पुष्टि पनि भइसकेको छ । तर, एकै स्थानमा सेक्स गर्दा सेक्सप्रति रुची घट्ने गरेको दम्पतीहरूले बताएका छन् । जसले उनीहरूको दैनिकीमा पनि रुची कम हुने गरेको छ । उनीहरूले फरक फरक स्थानमा सेक्स गर्दा सेक्स लाइफ उत्साहित बन्ने गरेको बताएका छन् । स्किन कन्डम नामक अमेरिकाको एक संस्थाले गरेको सर्भे अनुसार सेक्सका लागि दम्पतीको पहिलो रोजाई बैठक कोठा हुने गरेको छ । त्यसपछि बाथ रुममा सावर लिदै सेक्स गर्न रुचाउनेको संख्या ७४ प्रतिशत थियो । सेक्सपछि सफा गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले बाथरुमलाई रोजेको बताएका थिए । नयाँ स्थान र पोजिसनले यौनजीवन राम्रो एक्सपर्ट्सका अनुसार समय बित्दै जाँदा दम्पतीमा यौतप्रति रुची घट्दै जान्छ । यस्तो अवस्था आउनै नदिन सेक्स लाइफलाई कामोत्तेजक र एडभेन्चरस बनाई राख्न उनीहरूको सुझाब छ । यसमा नयाँ नयाँ स्थान र नयाँ नयाँ पोजिसनले सहयोग गर्ने उनीहरूको भनाई छ । उक्त…
यौन असन्तुष्टि कै कारण सम्बन्ध–विच्छेद हुनबाट यसरी बच्नुहोस् , युवतीको सेक्स डिजायर बढाउने यस्ता उपाय
यदि आफूमा सेक्स डिजायर उत्पन्न भएन भने के गर्नुहुन्छ ? यस्तो स्थितिमा आफ्नो पार्टनर त निराश हुन्छ नै, त्यसका साथै आफैंमा पनि हीनतावोध उत्पन्न हुनसक्छ । अझ लामो समय सेक्स डिजायर जागेन भने आपसी सम्बन्धमै दरार सिर्जना हुन सक्छ । त्यस्तै पार्टनरमा सेक्स डिजायर फिटिक्कै उत्पन्न भएन भने के गर्र्ने ? अन्तै जाने वा निराश भएर बस्ने ? यो गम्भीर कुरा हो । पार्टनरमध्ये कुनै एकमा अधिक सेक्स डिजायर हुनु र अर्काेमा फिटिक्कै नभएको अवस्था सिर्जना भयो भने सम्बन्ध कस्तो होला ? अझ लामो समयसम्म यस्तो अवस्था कायम रह्यो भने त सम्बन्धमै तुषारापात हुनसक्छ । एक अध्ययनले सेक्स डिजायर नभएकै कारण अमेरिकामा ४ लाखभन्दा बढी नागरिकले वर्षमा १० पटकभन्दा कम सेक्स गरेको पाइयो । नेपालमा बढ्दो सम्बन्ध–विच्छेदको एउटा ठूलो कारक बनिरहेको यौन असन्तुष्टि पनि यसकै रूप हो । एक्लोपनबाट टाढा एक अध्ययनअनुसार एक्लोपनका कारण अधिकांशमा सेक्स डिजायरभन्दा पनि नैराश्यता छाउ“छ । त्यस कारण सकभर पार्टनरस“ग सधैं स“गै बसे केही हदसम्म सेक्स डिजायर बढ्न सक्छ । विविध कारणले एक्लो बस्न बाध्य भएकाहरूको…
काठमाडौ,६असार।धादिङकी सुष्मा तामाङ बुधबार थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पुगिन । स्वास्थ्य जाँच गर्न पुगेकी उनले ओपिडीमा आफ्नो स्वास्थ्यबारे चिकित्सकलाई देखाइन् । २० वर्षीय तामाङको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकले अल्ट्रासाउण्डसम्म गरे । अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार स्वास्थ्य जाँचपछि तामाङको अवस्था सामान्य रहेको बताए । तर, तामाङले बिहीबार साँझ आफ्नो बच्चा हराएको भन्दै अस्पतालमा होहल्ला गर्न थालेकी छन् । गर्भवती नै नभएकी तामाङले बच्चा जन्माए पनि हराएको दाबीप्रति अस्पतालका कर्मचारी आश्चर्यमा परेका छन् । निर्देशक गौतमले तामाङको पाठेघर बच्चा भएको अवस्थामा नभएको बताए । ‘उसको पाठेघर सामान्य अवस्थामा छ, आज अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दा पेट नबोकेको देखियो,' डा. गौतमले भने, 'पेटै नबोकी बच्चा हराएको दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । अस्पतालमा उसको स्वास्थ्य जाँचबारे सबै रिपोर्ट छ ।' मैले बच्चा जन्माएको थे तर, हरायो भन्न पेट बोकेको नाटक गरेको आशंका रहेकाे गौतमले बताए । श्रीमानले र परिवारले बच्चा नपाएकाे भन्दै दवाव दिएकाले पेट ठुलो बनाएर बच्चा हरायो भन्ने रणनीति अपनाएको हुनसक्ने चिकित्सकले अनुमान…
डाक्टरको त्यो आत्महत्या ? श्रीमान समलिंगी रहेको र कुनै प्रकारको सम्बन्ध नरहेको भन्दै यस्तो सुसाईट नोट लेखेर एम्सकी डाक्टर प्रियाद्धारा आत्महत्या
यतिबेला आत्महत्या गर्ने चलन फेसन जस्तै भएको छ अर्थात मानिसहरुले आत्महत्यालाई निकै सामान्य रुपमा लिने र शारिरिक तथा मानसिक रुपमा थोरै प्रकारको पनि तनाव आउनासाथ आत्माहत्याको बाटो रोज्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । नेपाल र भारतमा पछिल्ला समयमा अलि धेरै नै यस्ता प्रकारका समाचारहरु आईरहेका छन् । यस्ता समाचारहरुको कारण आम नागरिकलाई पिडादायी समेत बनाएको छ । एतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीमा एक महिला डाक्टरको आत्महत्याको विषयले सनसनी मच्चाएको छ । एम्स अस्पतालमा काम गर्ने प्रिया बेदीले आत्महत्याअघि एक सुसाईड नोट लेखेर फेसबुकमा आफूले आफ्ना आत्महत्याको जिम्मेवार श्रीमान भएको बताएकी छन् । उनको विवाह ५ वर्षपहिले डाक्टर कमल वेदीसँग भएको थियो । उनले विवाहको ५ वर्षसम्म पति - पत्नीबीच शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गरेकी छिन् । समलिंगी रहेका उनका श्रीमानले आफूलाई भावनात्मक रुपमा प्रताणित गरेको भन्दै उनी आफ्नो जीवनको अपराधी भएको प्रष्ट पारेकी छन् । विवाह लगत्तै उनले श्रीमान समलिंगी भएको थाहा पाएपनि आफूले स्वीकार गरेर बसेको र…
स्याङ्जा,३ असार । जिल्लामा बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या बढदै गएको छ । नेपालको कानूनमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । तर बिहे गर्ने उमेर अगावै गर्भपतन गराउने किशोरीहरुको सङ्ख्या यहाँ बढ्दै गएको पाइन्छ । गर्भपतन गराउनेमा विवाहित मात्रै नभएर अविवाहित पनि आउने गरेको ग्रौघ्याङ्लिङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमी रेनुका शर्माले बताउनुभयो । महीनामा ४० देखि ६० जनासम्म गर्भपतनका लागि आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अनमी शर्माले भन्नुभयो, “१३ देखि २० वर्षभित्रका अविवाहित किशोरीहरुसमेत गर्भपतन गराउनका लागि आउने गरेका छन् ।” श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा भएका महिलाहरु बढी आउने गरेको शर्माको भनाइ छ । जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाका प्रमुख डाक्टर अमृत पोख्रेलले जिल्लामा असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने कानूनी मान्यता रहे पनि लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने क्रम बढेको बताउँदै बाहिर असुरक्षित ठाउँमा गर्भपतन गराउने अनि रक्त सरापको समस्या भएपछि अन्तिम अवस्थामा आफूहरु कहाँ आउने गर्दा रगत…
विधुवा महिलाले परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्नैपर्ने यस्तो देश
अफ्रिकाको घानामा एक परम्परा अनुसार विधवा महिलाको आत्मा शुद्धीका लागि भन्दै परपुरुषसँग रात विताउनु पर्ने चलन छ । विधवा महिलाले परपुरुषसँग रात बिताउने क्रममा आफ्नो मनमाथि नियन्त्रण राख्न सके उनको आत्म पवित्र हुने विश्वास गरिन्छ । क्यामरुन, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाको केही भागमा युवतीको स्तनमा तातो ढंगाले आइरन गरिन्छ । युवतीको स्तन ठूलो हुनबाट रोक्न उनीहरुको स्तनमा तातो ढुंगाले आइरन गरिन्छ । स्तनमा तातो ढुंगाले आइरन गर्दा महिला परपुरुषमाथि कम ध्यान दिन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । यस पृथ्वीमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्छन । जसको परम्परा र सभ्यता पनि फरक फरक हुन्छ । ती मध्ये कतिपय स्थानमा युवतीहरुलाई जनावरको जस्तो व्यवहार गरिन्छ । पूर्वी अफ्रिकामा यस्तो जाति छ, जसले छोरी मान्छेको योनी सिलाइ दिन्छन् । छोरी मान्छेले विवाह अगाडि यौन सम्पर्क नगरुन भनेर उनीहरुको योनी सिलाइन्छ । विवाह गरेपछि सिलाइएको योनी खोलिदने चलन छ । परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने यो अमानवीय व्यवहार अहिले पनि जारी छ । यसरी योनी…
कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको थियो, के यौनरोग लाग्नसक्छ ?
डा. राजेन्द्र भद्रा । म १९ वर्षको भए । म १३ वर्षको हुँदा कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको यियो । दुई–तीन पटक लिङ्ग पसाउँदा वीर्य स्खलन होला जस्तो भएर बाहिर निकालेको थिएँ । त्यसको केही महिनापछि मेरो वीर्यमा ठोस पदार्थ (चामल जस्तो) देखियो । कुकुरसँग सम्पर्क हुँदा यस्तो हुन्छ र ? अनि यसबाट कुनै यौनरोग (SITI) सर्छ ? यौनरोग (SITI) पिसाब जचाउँदा थाहा हुन्छ भनिन्छ, पिसाबमा यसको असर देखिन्छ ? असर परेको वा नपरेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? कुकुर सँगको यौन सम्पर्क यौन मानिसको एक अभिन्न कुरा हुँदाहुँदै पनि यो एकदम गोप्य कुरा पनि हो । यौनसम्बन्धी कतिपय क्रियाकलापको सन्दर्भमा समाजको आ–आफ्नै नियम एवं मूल्य–मान्यता हुन्छ । सामान्यत: मानिसहरूले त्यसकै परिधिभित्र रहेर व्यवहार गर्छन्, तर समाजका नियम वा मान्यताभन्दा फरक किसिमको व्यवहार गर्ने व्यक्ति पनि समाजमा नहुने होइनन् । यस्तो व्यवहारलाई अंग्रेजीमा प्याराफिलिया भनिन्छ । सजिलो भाषामा भन्ने हो भने सामान्य व्यक्तिलाई यौन उत्तेजना प्रदान नगर्ने वस्तु वा व्यवहारवाट यौन उत्तेजना प्राप्त गर्नु नै प्याराफिलिया हो । कोही आक्कलझुक्कल यस किसिमको यौन व्यवहारमा संलग्न हुन…
धेरै एचआइभी संक्रमितले नियमित उपचार गराउँदैनन्
अछाम ३२ जेठ ।अछाममा एचआइभी संक्रमितको संख्या १४ सय ११ पुगेको छ । जसमा ७०९ महिला र ६३४ पुरुष रहेका छन् । जसमा नियमित उपचार गराउने ६१६ जना मात्र छन् । जिल्लामा रहेको ७२ स्वास्थ्य चौकी, दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिल्ला अस्पताल मंगलसेन र वयलपाटा अस्पतालको तथ्यांक अनुसार २०६३ साल यता एचआइभीको कारण एक सय ८१ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल अस्पतालमा नियमित उपचारको लागि ६१६ जना मात्र आउने गरेका छन् । संक्रमितको तथ्यांक मात्र छ तर उनीहरु कहाँ छन् भन्नेबारे कुनै रेकर्ड नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक झपटराज ढुंगानाले बताए । ‘बिचमै उपचार छोड्नेको संख्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुबारे सरकारी निकायसँग कुनै रेकर्ड छैन ।’ उपचारको क्रममा बीचमै हराएका मध्ये अधिकांश रोजगारीको सिलसिलामा भारत गई उतै औषधी सेवन गरिरहेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत आशुतोष श्रेष्ठले बताए । ‘यहाँका धेरै मानिस मजदुरी गर्न भारत जान्छन्,’ उनले भने, ‘केही संक्रमितहरु पनि गएको सुनेका छौ ।’…